Tag: ahịa dabere na akaụntụ | Martech Zone
Tag: ahịa dabere na ahịa
Mara ihe niile, yabụ ị nwere ike ịme ihe ọ bụla: Otu 6sense si emebi ụlọ ọrụ ABM
Buyingzụta B2B agbanweela - ndị na - azụ ahịa taa bụ ndị na - amaghị aha ha, nkewa ha ma na - eguzogide ha. Mgbalị B2B Sales na Mgbalị na-aga n'ihu na-adịwanye obere ma ọ bụ na-adighi ike dị ka ndị otu na-akpata ego na-alụ ọgụ maka nlebara anya nke ndị ahịa na atụmanya na gburugburu ebe mkpọtụ na-arịwanye elu. Iji merie ma merie taa, ndị otu na-enweta ego B2B kwesịrị ịgbanwe ụzọ ha iji nweta ihe ndị ahịa B2B nke oge a chọrọ. Na B2B taa na-azụ ala, ndị na-azụ ahịa bụ: Amaghị - Na
Snowflake Na-akọwa Otu Ha Si Gbanwee Ahịa Ha na Azụmaahịa Dabere na Akaụntụ #CONEX
Monday, August 20, 2018 Tuesday, August 21, 2018 Douglas Karr
Anọ m na Toronto na-abịa nzukọ ogbako Ahụmahụ Uberflip. Taa, anyị na-anọ ụbọchị ahụ na ọmarịcha isi ụlọ ọrụ Uberflip ma na-ege ụfọdụ ndị ọkà okwu ntị. Otu nnọkọ nke nwere mmetụta dị ukwuu n'ahụ m bụ Snowflake's ABM Director, Daniel G. Day, na-ekwu maka otu o si mepụta mmemme ABM nke rụpụtara nsonaazụ ahịa Snowflake. @uberfliphq nke gafere ebe #CONEX na-am ị! Mara mma HQ ebe a na #Toronto #torontotech A post na-akọrọ site Douglas Karr (@IGIHE)
Thursday, January 25, 2018 Fraịde, Jenụwarị 26, 2018 Douglas Karr
Mgbe mbụ m nụrụ okwu Akaụntụ-Dabere Marketing a afọ ole na ole gara aga, M sụọ ude. Dị ka ogologo oge m na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ na nnukwu ụlọ ọrụ, anyị nwere ndị nnọchi anya ahịa dị mkpa nke nyochara, lekwasịrị anya, ma mechie akaụntụ ndị isi. ABM abụghị naanị okwu ugha, n'agbanyeghị. ABM etolitela n'ime usoro egosipụtara, nke a na-edozi nke ọma yana ụfọdụ ngwaọrụ dị egwu iji nyere aka chọpụta ohere na soro ha ruo na njedebe. ABM na-aga n'ihu na ịrị elu na ewu ewu na nnabata
Wenezde, August 2, 2017 Tuesday, August 1, 2017 Joe Andrews
Nrụgide na CMO na-arị elu ngwa ngwa ka enyere ha ọrụ ọzọ maka mmụba ego, gụnyere itinyekwu ego na usoro iji mee ya. I kwuru, sị, “Ọ dị ukwuu. N'ikpeazụ ụfọdụ nkwanye ùgwù maka ndị na-ere ahịa. Ma ihe ịma aka a bụ ugbu a ka a na-aza ha ajụjụ maka ibute nsonaazụ nwere ike - na ngwa ngwa. Nnukwu ihe mgbochi nye ihe ịga nke ọma bụ ndị ahịa azụmaahịa enweghị ikike dị mkpa iji tụọ mmetụta ha na uto ego nzukọ a (dịka ozi ịchụpụ
Ahịa na-ere ahịa (ABM) na-enweta ala n'etiti ndị na-ere ahịa B2B. Dabere na nyocha emere n'oge na-adịbeghị anya, 2017 B2B Programmatic Outlook, 73% nke ndị ahịa B2B ugbu a na-eji ma ọ bụ na-eme atụmatụ ịmụta ABM na 2017. Ọ bụ maka ezigbo ihe kpatara ya: ABM's ROI nwere ike ịka mma karịa ahịa B2B ndị ọzọ. ABM abụghị echiche ọhụrụ. N'ezie, ụfọdụ na-arụ ụka na ABM adịla kemgbe ahịa. Ọ bụ atụmatụ na-emeso akaụntụ ọ bụla dị ka
Kedu usoro, usoro, na ọwa kwesịrị ndị na-ere ahịa lekwasịrị anya na 2017
Mọnde, Jenụwarị 16, 2017 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
M na-atụ anya na-agụ na ihe ma ọ bụ na anyị obodo ihe ị na-elekwasị anya na 2017. Dị ka ihe gị n'ụlọnga, anyị na-na-wetara na otutu ntụziaka ma anyị na-elekwasị anya na ndị ahịa na-aga na-ebuli ha ahịa na-emefu na-enye uru Ngwaahịa na ọrụ anyị nke ha tinyere. Otu uru anyị nwere dịka ndị mbipụta akwụkwọ na ụlọ ọrụ bụ na anyị nwere ike ịnwale ihe na-egbu maramara iji belata ihe egwu ọ bụla.
Salesre ahịa na ire ahịa: Amụma kacha elu maka Ọdịnihu
N'oge na-adịbeghị anya, anyị nwere mkparịta ụka dị egwu na Giles House na otu n'ime isiokwu nke mkparịta ụka ahụ bụ ịre ahịa na ịzụ ahịa ahịa. Ọhụrụ na ajụjụ ọnụ ahụ, InsideView bipụtara n'oge na-adịbeghị anya amụma ndị a maka nhazi na ahịa. Ha dabere na akwụkwọ ọhụrụ ahụ, Aligned to Achieve: Otu ị ga - esi mee ka ndị ahịa gị na ndị ahịa gị dị n’otu otu Force for Growth, nke InsideView si CMO Tracy Eiler dere, yana VP nke Enterprise Sales Andrea Austin. Amụma ndị ahụ dabere na nsonaazụ nke